Uzongabaza ukuthi ingumqwali ne-4008 | IOL Isolezwe
Uzongabaza ukuthi ingumqwali ne-4008
Isolezwe / 28 June 2012, 1:42pm /
ISITHELEKILE kuleli iPeugeot 4008 okuyi SUV encane. Ngemuva inesikhala esikhulu sokubeka impahla esingu 384 litres
IMOTO: Peugeot 4008
INANI: 4008 2.0 CVT Active	R363 900 4008 2.0 CVT Allure	R388 500
KWA Peugeot basebenzise uhlelo lokuhlaziya izimoto iTop Gear ebibanjwe ngeledlule eThekwini ukwethula imoto yabo entsha i-4008 okuyi sports utility vehicle edonsa ngawo womane amasondo ifour-wheel drive. Noma ithi ayithathe kancane kwi 3008 yona eyi multi-purpose vehicles, edlise ngokuba yi Crossover, kodwa i-4008 yakhelwe ukuhamba emigwaqeni okungeke kwahamba nanoma iyiphi imoto ejwayelekile ikakhulukazi njengoba iyi-SUV.
Mina ngivele ngayizwela i-4008 ngesikhathi ngibona ukuthi iyi SUV ngoba lokho kusho ukuthi le moto enhle kangaka kuzomele inqamule imimango nezintaba ukuze uzwakale kahle umuzwa wayo.
Awucabange nje igrille ye 4008 edonsekile kuhle kwamehlo eShayina yase igqiza ngombala ocwebezelayo. Amalambu akhona i-LED daytime running aseqala ukungiphuma ngoba asetholakala kuzo zonke izinhlobo zezimoto.
Ilekelelwa amasondo awugqinsi okungabuzwa ukuthi awokuhamba emigwaqeni emibi.
Ngaphakathi kusetshenziswa isikhumba esithambile, yase igqiza ngemibala ecwebezelayo ezindaweni ezithile njengazo zonke izimoto ezakhiwa manje nabo kwa-Peugeot bakuqikelele ukuthi amabhathini nokunye okuhambisana nokushayela bakwenze kwaqondana nomshayeli ukuze amehlo akhe angasuki emgwaqeni. Isiteringi nje siphethe izinto eziningi njenge cruise control Bluetooth. Uma uvula ibhonethi uzowubona umphumela wokusebenzisana phakathi kwe Peugeot ne Mitsubishi. Injini yayo ingu 2.0 litre four cylinder isebenzisa upetrol.Le njini inamandla afinyelela ku 110kW ne torque engu 197Nm, ugearbox wakhona udonsa ngamagiya ayisithupha kanti owohlobo lwe CVT kuzo zonke izinhlobo.
Phela itholakala ngezinhlobo ezimbili kukhona i- Active ne Allure bese kushiyana ukwenza ngezinto ezitholakala kuzo lezi zimoto kusukela kwezobuchwepheshe, ukuvuleka nezokuphepha.
Lapha sikubalela izinto ezifana ne-USB ne-Bluetooth connectivity, ama airbag ayisikhombisa, iclimate control, amalambu azikhanyelayo kanjalo nama wiper avele asebenze uma ezwa amanzi njengemvula namasondo angu 18 inch.
Uhlobo lwe Allure luphinde luthi thuthu ngezinga njengoba luphuma nophahla okwazi ukubona isibhakabhaka ushayela iCielo glass panoramic roof, kanjalo nama roof bars, izihlalo zesikhumba nezihlalo ezifudunyezwayo.
Njengoba kuyi 4x4 iwushiyile umhlaba ngoba ukuphakama kwayo kungu 200 mm. Izinsimbi zokuthwala ezisokhakhayini zigcwalisa ukuba kwayo i-SUV.
Noma ungeke uyibeke esigabeni sama SUV amakhulu kodwa yona idle ngokuqoqeka. izihlalo zangaphambili yilezo ongena kuzo zikugomothele no dashboard oqondene ngqo nomshayeli.
isiteringi sayo yileso esihlukene izigaba ezintathu esiqukethe yonke into njenge radio okwazi ukuyishintsha kuso kanjalo ne-Bluetooth njengoba sesike sakubekela. Izihlalo zangemuva ziyakwazi ukulala kuvuleke isikhala. ngemuva isikhala sokubeka impahla singu 384 litres. Phakathi kwezihlalo zangaphambili kunezikhala zokubeka izingilazi kanjalo namaphakethe ongabeka kuwo izinto njengeselula nesikhwama esincane semali. emaceleni ezihlalweni zangaphambili futhi kunezindawo ezingangena amabhodlela angu 1,5-litre.
IPeugeot 4008 iyakwazi ukuhamba ngejubane isuka ku 0 ifinyelele ku 100 km/h ngemizuzwana engu-10,9 kanti ijubane layo eliphezulu ligcina ku 188 km/h.
Ngokwezinga lezimoto ezingama SUV isebenzisa upetrol oyisikalo esingu 8,1 ngezinga lika 100 km, kodwa nalapho ngiyakugcizelela ukuthi kuya ngokuthi wena uyishayela kanjani. Njengoba ngike ngabeka ekuqaleni le moto ibisethulwa nje kusazovela ithuba lokuthi ivivinywe lapho sizothola khona nethuba lokukubikela nokunye.